တခြို့လူတှကေ အရမျးကို ဟနျဆောငျကောငျးကွပါတယျ – Shinyoon
တခြို့လူတှကေ အရမျးကို ဟနျဆောငျကောငျးကွပါတယျ ။
ကိုယျ့အနားကို လာပွီးရပျတဲ့အခါတုနျးက . . .ကွငျနာသလိုလိုနဲ့ ဂရုစိုကျသလိုလိုနဲ့ပေါ့ ။ ကိုယျ့မှာ အဟုတျကွီးတှေ မှတျပွီး အပြျောကွီးတှေ ပြျောခဲ့ဖူးတာတှကေို ပွနျပွီး အမှတျရသေးတယျ ကြှနျမ တကယျကွီး ထငျမှတျခဲ့တာ ။
အဲ့တုနျးကဆို. . .ဂရုစိုကျတာလေးက အစ ကွငျနာတာတှအေဆုံး ကိုယျပေးတဲ့ မတ်ေတာတှေ စဈမှနျလို့ ပွနျပွီး ရလာခဲ့တာလို့ပဲ အထငျတှေ ရောကျနတောလေ ။ မကျြနှာဖုံးတှေ မကှာကခြငှအထိ ဟနျဆောငျ လိမျညာနမှေနျး တကယျ မရိပျမိခဲ့ဘူး တကယျကွီးကို ဟနျဆောငျကောငျးခဲ့တာပါ ဟောလိဝုဒျမှာသာ လူဖွဈခဲ့ရငျ အျောစကာဆု ရလောကျတဲ့အထိ တကယျကို တျောတယျ
ကိုယျကလဲ ညံ့ခဲ့တာကိုး . . . လူတိုငျးကို ကိုယျ့လိုအမှတျနဲ့ပဲ စိတျရငျးထဲက အတိုငျး ပေါငျးခဲ့မိတာ ။ ကိုယျ့ဘကျက စတေနာမှနျခဲ့သလို သူ့ဘကျကလဲ ပွနျပွီး နားလညျမယျလို့ ထငျခဲ့တာလေ ။ ကိုယျ့ဘကျက မတ်ေတာတှေ စဈမှနျခဲ့သလို သူ့ဘကျကလဲ အစဈအမှနျတှေ ပွနျရလိမျ့မယျလို့ တဈထဈခကြွီး တှေးခဲ့မိတာလေ ။ ကိုယျညံ့ခဲ့တာလဲ ပါပါတယျ ။
လူတဈယောကျအကွောငျးကို အပျေါယံလေးကွညျ့ပွီး ဆုံးဖွတျလို့ မရဘူးဆိုတာမှနျး တကယျ သဘောပေါကျ နားလညျသှားပွီ ။ ကိုယျတဈခုခု မဖွဈမခငျြး ကိုယျ့အနားမှာ ရပျနတေဲ့ လူတိုငျးကိုလူကောငျးလို့ ထငျခဲ့မိတာပါပဲ ။ တကယျ ဒုက်ခ ဖွဈတဲ့အခါမှသာ မကျြနှာ ဖုံးတှေ ကှာကပြွီး အဲ့ဒီမကျြနှာဖုံးအောကျ တကယျ့ မကျြလုံးတှကေို တှခှေ့ငျ့ မွငျခှငျ့ရခဲ့တာလေ ။
အခုဆို . . . ကြှနျမ တဈယောကျတညျးလဲ အဆငျပွအေောငျ နပေါတယျ ဂဲမှနျခဲ့ဖူးတဲ့ စာသူငယျလိုပေါ့ တဈခါ အညာခံပွီးသှားတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျက လှယျလှယျလေးနဲ့ မယုံတတျတော့ မယုံခငျြတော့တာတော့ မမှားဘူး မဟုတျလား ။ လူတဈယောကျကို လှယျလှယျလေး မယုံတတျတော့ဆိုတာထကျ ကြှနျမ ပုံပွငျတှေ အပွောကောငျးတဲ့လူတှနေဲ့ ထပျတှေ့ ထပျဆုံရမှာ ကွောကျလာတာပါ ။ တခြို့က သိပျကိုဟနျဆောငျကောငျးတာလေ ။
တဈခါတဈရံ . . . ၀မျးနညျးမိတယျ . ..ကိုယျပေးခဲ့သလို ဘာလို့ ကိုယျပွနျမရခဲ့သလဲဆိုတဲ့စိတျ ကိုယျ ဖွူစငျခဲ့သလို ဘာလို့ ပွနျပွီးမဖွူစငျနိုငျခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ အတှေးတှနေဲ့ တဈခါတဈရံ တကယျကို ၀မျးနညျးမိပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ . . . ဆကျပွီး မတှေးမိတော့ဘူး သံသရာတဈခုမှာ . . . ကြှနျမလဲ ဟနျဆောငျလိမျညာခဲ့ဖူးလို့ အခုလို ပွနျပွီး နာကငျြရတာဖွဈမှာပါလို့လဲ ဖွသေိမျ့ပါတယျ ။
တချို့လူတွေက အရမ်းကို ဟန်ဆောင်ကောင်းကြပါတယ် ။
ကိုယ့်အနားကို လာပြီးရပ်တဲ့အခါတုန်းက . . .ကြင်နာသလိုလိုနဲ့ ဂရုစိုက်သလိုလိုနဲ့ပေါ့ ။ ကိုယ့်မှာ အဟုတ်ကြီးတွေ မှတ်ပြီး အပျော်ကြီးတွေ ပျော်ခဲ့ဖူးတာတွေကို ပြန်ပြီး အမှတ်ရသေးတယ် ကျွန်မ တကယ်ကြီး ထင်မှတ်ခဲ့တာ ။
အဲ့တုန်းကဆို. . .ဂရုစိုက်တာလေးက အစ ကြင်နာတာတွေအဆုံး ကိုယ်ပေးတဲ့ မေတ္တာတွေ စစ်မှန်လို့ ပြန်ပြီး ရလာခဲ့တာလို့ပဲ အထင်တွေ ရောက်နေတာလေ ။ မျက်နှာဖုံးတွေ မကွာကျခငွအထိ ဟန်ဆောင် လိမ်ညာနေမှန်း တကယ် မရိပ်မိခဲ့ဘူး တကယ်ကြီးကို ဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့တာပါ ဟောလိဝုဒ်မှာသာ လူဖြစ်ခဲ့ရင် အော်စကာဆု ရလောက်တဲ့အထိ တကယ်ကို တော်တယ်
ကိုယ်ကလဲ ညံ့ခဲ့တာကိုး . . . လူတိုင်းကို ကိုယ့်လိုအမှတ်နဲ့ပဲ စိတ်ရင်းထဲက အတိုင်း ပေါင်းခဲ့မိတာ ။ ကိုယ့်ဘက်က စေတနာမှန်ခဲ့သလို သူ့ဘက်ကလဲ ပြန်ပြီး နားလည်မယ်လို့ ထင်ခဲ့တာလေ ။ ကိုယ့်ဘက်က မေတ္တာတွေ စစ်မှန်ခဲ့သလို သူ့ဘက်ကလဲ အစစ်အမှန်တွေ ပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ တစ်ထစ်ချကြီး တွေးခဲ့မိတာလေ ။ ကိုယ်ညံ့ခဲ့တာလဲ ပါပါတယ် ။
လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို အပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူးဆိုတာမှန်း တကယ် သဘောပေါက် နားလည်သွားပြီ ။ ကိုယ်တစ်ခုခု မဖြစ်မချင်း ကိုယ့်အနားမှာ ရပ်နေတဲ့ လူတိုင်းကိုလူကောင်းလို့ ထင်ခဲ့မိတာပါပဲ ။ တကယ် ဒုက္ခ ဖြစ်တဲ့အခါမှသာ မျက်နှာ ဖုံးတွေ ကွာကျပြီး အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးအောက် တကယ့် မျက်လုံးတွေကို တွေ့ခွင့် မြင်ခွင့်ရခဲ့တာလေ ။
အခုဆို . . . ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်းလဲ အဆင်ပြေအောင် နေပါတယ် ဂဲမှန်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာသူငယ်လိုပေါ့ တစ်ခါ အညာခံပြီးသွားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က လွယ်လွယ်လေးနဲ့ မယုံတတ်တော့ မယုံချင်တော့တာတော့ မမှားဘူး မဟုတ်လား ။ လူတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်လေး မယုံတတ်တော့ဆိုတာထက် ကျွန်မ ပုံပြင်တွေ အပြောကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ ထပ်တွေ့ ထပ်ဆုံရမှာ ကြောက်လာတာပါ ။ တချို့က သိပ်ကိုဟန်ဆောင်ကောင်းတာလေ ။
တစ်ခါတစ်ရံ . . . ၀မ်းနည်းမိတယ် . ..ကိုယ်ပေးခဲ့သလို ဘာလို့ ကိုယ်ပြန်မရခဲ့သလဲဆိုတဲ့စိတ် ကိုယ် ဖြူစင်ခဲ့သလို ဘာလို့ ပြန်ပြီးမဖြူစင်နိုင်ခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ တကယ်ကို ၀မ်းနည်းမိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် . . . ဆက်ပြီး မတွေးမိတော့ဘူး သံသရာတစ်ခုမှာ . . . ကျွန်မလဲ ဟန်ဆောင်လိမ်ညာခဲ့ဖူးလို့ အခုလို ပြန်ပြီး နာကျင်ရတာဖြစ်မှာပါလို့လဲ ဖြေသိမ့်ပါတယ် ။